Homeတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး46 KahramanmarasYedikuyu ထွက်သွားတဲ့နှင်းလျှောစီး Center က Path ကိုAsfaltlanıyဖြစ်ပါသည်
16 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 46 Kahramanmaras, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, ကတ္တရာသတင်းများ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
yedikuyu သည့်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းမှ asfaltlaniy လမ်းရှိပါတယ်
ဒါဟာအဓိကအားဖြင့် Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Yedikuyu ရပ်ကွက်အတွင်း Bertiz နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေဖို့ access ကိုပေးကတ္တရာသွေးလွှတ်ကြောအတွင်းက၎င်း၏အလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, လမ်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်အလုပ်ဆက်စပ် Yedikuyu ကတ္တရာအလုပ်ဖို့နည်းလမ်းအပေါ်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Filler မှပူးတွဲဦးစီးဌာနသိပ္ပံရေးရာအဖွဲ့ကခဏတစ်များအတွက်ဧရိယာထဲမှာအလုပ်လုပ်နေခဲ့သညျ။ အဆိုပါလမ်းဟောင်းကတ္တရာဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် compacting ၏ပြိုကျကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါပစ္စည်းထို့နောက်လမ်းကြောင်း Array ကိုကတ္တရာများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြသည်နိုင်ပါတယ်။
2 400 တထောင်မီတာလမ်းကြောင်း
Yedikuyu ပြည့်စုံကတ္တရာအလုပ်ကိုစတင်ခဲ့ရှိရာအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ရပ်ကွက်အတွင်း Bertiz2400 တထောင်မီတာသွေးလွှတ်ကြောအဆာအတွက်နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး။ ဦးစီးဌာနဖြင့်ကြေညာချက်၏သိပ္ပံရေးရာမြူနီစီပယ်, "ငါတို့သည်ငါတို့၏ကတ္တရာသိပ်သည်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ခဲ့ရှိရာဒေသများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်၏ပြီးစီးအတွက်ဖြည့်ပါ။2400 တထောင်အရှည်မီတာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်၏သွေးလွှတ်ကြောကျယ်ပြန့် 14 မီတာတိုတောင်းတဲ့ကာလခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ ငါတို့မွို့မှကံကောင်းပါစေ "ဟုအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များ၌ပေးသောခဲ့သည်။
Yedikuyu နှင့် Bertiz Paths ကိုပြုပြင်တာတွေ 19 / 08 / 2019 လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများနှင့်ပြုပြင်အလုပျအတှကျ Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Yedikuyu နှင်းလျှောစီးနှင့် Bertiz ရပ်ကွက်အတွင်းမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ပြုပြင်အလုပ်၏နယ်ပယ်အတွင်းလက်ရှိလမ်းကတ္တရာအမှုတော်တို့ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအနေဖြင့် Kahramanmaras တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တဦးတည်းလက်၌တဦးတည်းလက်အပေါ်လမ်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ Kahramanmaras ဖွယ်ရှိအဆိုးမြင်အတွေးတွေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ်ဆန့်ကျင်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, အထူးသဖြင့်ဖြေရှင်းချက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်နှင်းလျှောစီး Center က Bertiz ရပ်ကွက်အတွင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးလမ်းပေါ်တွင်ခရီးသွား Yedikuyu အတွက်အရေးပါသောနေရာ, ဆက်လက်ရှိခြင်း
လမ်းခရီးPınarçaAsfaltlanıyများမှာ 22 / 09 / 2014 Pınarça Paths Asfaltlanıyဖြစ်ပါသည်: အဆိုပါ PINARCI ရပ်ကွက်အတွင်းလမ်းများရရှိနိုင်သိပ္ပံရေးရာ Tekirdag မြူနီစီပယ်ညွှန်ကြားမှုတွဲအဖုံးကသူ့အလုပ်နှင့်အတူအဖွဲ့များသည်ကတ္တရာလမ်း demystifies ။ သိပ္ပံရေးရာညွှန်ကြားမှုသင်း၏အဖုံးမြူနီစီပယ်နှင့်အတူဖြည့်စွက်၏လုပျငနျး၏ရပ်ကွက်အတွင်းလမ်းဘေးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ပြီးစီးရန်ဦးဆောင်လမ်းပေါ်မှာ PINARCI ယခုလမ်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ကတ္တရာမှစတင်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်အပေါ်မှတ်ချက်များအတွက်မြို့တော်ဝန်နှစ်အရွယ် Irfan တံခါးကျင်, 'ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပေါ်အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းမှဦးဆောင်' 'PINARCI မကြာမီပြီးနောက်ကျနော်တို့ Kapakli လမ်းဘေးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အဆာချိတ်ဆက်ဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ ကြှနျုပျတို့သညျ "ဟု၎င်းကပြောသည်။ မြို့တော်ဝန်နှစ်အရွယ် Irfan လီဗာ," က, ကတ္တရာလမ်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအပြီးသတ်ပြီးနောက်ဤလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့ငါတို့သည်ကြောကျခငျး Avenue သို့မဟုတ်လမ်းမချန်မထားခဲ့ဘူး, ကတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်း ... ။
Yedikuyu နှင်းလျှောစီးဘဝကနောက်နေတာလား 13 / 03 / 2015 Yedikuyu နှင်းလျှောစီးဘဝကနောက်နေတာလား: Kahramanmaraşlı Yedikuyu သည့်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၏လုပျငနျးစတငျစကီးကိုခံစားပါလိမ့်မယ်။ Fatih Mehmet Erkoç၏မြို့တော်ဝန်ဟောင်းတူရကီနှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌÖzerသမ္မာသတိရှိကြလော့, ပါမောက္ခ ဆရာဝန် Mustafa Ilıcalı, နည်းပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုလယ်ပြင်၌ရှိသောစာမေးပွဲနှင့် တွဲဖက်. ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်စရိုက်နှင့်နှင်းလျှောစီး Cumbul Yedikuyu တှငျတှေ့စီမံကိန်း Utkan Ilıcalıထိုသို့ပြုကြမည်တဲ့ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင်။ Yedikuyu နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်အတူ 1850 ကုဒ်Erkoçဧည့်သည်များအတွက်ကြေညာချက်ကို လုပ်. , ဆိုက်ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်ပြီ "ချီးမွမ်းဖြစ်, ငါတို့ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာနှင့်ပတ်သက်သောစီမံကိန်း၏စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဆင့်ပြီးစီးခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၏အနာဂတ်ပြိုးထောငျရနျကွိုးစား။ ငါတို့မြေခွဲဝေပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ...
RayHaber 16.09.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
လက်မှတ်ပေါင်းနှင်းလျှောစီးAtıldıမှ Yedikuyu များမှာ
Yedikuyu နှင်းလျှောစီးဧရိယာ Continues
Yedikuyu Sezo မည်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းကြီးထွားလာ
နိုင်ငံတော်သမ္မတသည်Erkoçခါနီး '! .. Yedikuyu နှင်းလျှောရာသီရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (265) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)